Todays Nepal News (TNN) » छुट्टिएर अंशमा हैन, संगोलमा समग्रतामा रमाउं!
जय राज्य राष्ट्रवाद!!
कतिलाई दार्जेलिङको द्वन्द पिडादायी लागेको होला, कतिलाई आनन्दमयी र कतिलाई तराई-मधेसको पिडाको प्रतिषोध …व्यवहारिक रुपमा सहिलागे पनि सैद्वान्तिक रुपमा गलत भइरहेको छ। किनकि गोर्खाल्याण्ड भित्र पनि विविधता छ र त्यस किसिमको विविधता भित्र पनि भाषिक, धार्मिक, जातिय, जनजातिगत रुपमा कुनै न कुनै किसिमको वहु राष्ट्रियता रहेका छन्, तिनको माग र मर्म कायाम राख्न सिकिएन र सम्मान गर्न सिकिएन भने गोर्खालेन्ड बाट फेरि अर्को लेन्ड छुट्टाउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने पनि त्यतिनै सम्भावना रहन्छ, हैन र? राज्य-राष्ट्रको अवधारण र सिद्वान्त यस सन्दर्भमा अति आवश्यक छ। आज दर्जेलिङका नेपाली भाषिले छुट्टिएर अधीकार सम्पन्न हुदा खुसिहुदा भोलि मधेस, कोच, लिम्वुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, नेवाराज्य, तमुवान, मगरात…अलग्गिदा खुशि मान्ने कि नमान्ने?
आज तराई-मधेशमा पहिचानका राज्यको माग राखि आन्दोलन गरिरहेका क्षेत्रिय द्वि राष्ट्रवादि गुटहरुलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग पुर्याइ रहनुहुने भारतीय राजनीतिक तथा कुटनितिक नेत्रित्व दार्जेलिङको आगो अन्यत्र फैलिदा तपाईको मन भतभति होलाकि, नहोला?क्षणिक आवेग र आत्मरति वाट हैन विधि र नियम संगत ढंगले विचार अभिव्यक्त गरौं र नागरिकका न्याय, अधीकार र आत्मसम्मानका सवालमा ठन्डा दिमागले सोचेर मात्रै अभिव्यक्ति दिने र कार्य गर्ने गरौं। नेपालको प्रदेश विभजनमा सवै दल चुकेको के भने, २ नम्वर प्रदेशमा चाहिं पहाड मिसाउनै नहुने र ५ नं. प्रदेशमा चाहिं पहाड छुटाउनै नहुने प्राकृतिक सिद्वान्त भयो र?नेपाली भाषिले अधिकार पाउने कुराले मलाई पनि खुशि लागेको छ। आखिर अधीकारकै कुरो त रहेछ र हो पनि। त्यत्रो पिडा, दुख, त्याग, वलिदान र धनजनको क्षती वाट प्राप्तहुने अधिकार नेपाली भाषि भारतिय नागरिकलाई आत्मसम्मान, नीतिनिर्माणमा समान सहभगिता, राज्यवाट प्रदान गरिने शेवासुविधामा समानताको अधीकार दिएको भए, न गोर्खाल्याण्ड चाहिन्थ्यो, न पहिचान चाहिन्थ्यो, न वलिदान चाहिन्थ्यो, न धनजनको क्ष्यति हुन्थ्यो। छुट्टिने र अलग पहिचानमा रमाउने सिद्वान्त कता बाट छीर्यो? किन छीराइयो? तत्कालिन र दिर्घकालिन लक्ष्य के हो? हामि आम सर्वसाधारण नागरिकले ध्यानदिएर सोचौं। अंगिकृत नागरिकले पनि देश र समाजका लागि अतुलनिय योगदान दिएका प्रसस्तै प्रमाणहरु छन्, संसारमा।
आफ्ना नागरिकलाई अधिकार सम्मपन्न, अात्मसम्मान, शसक्तिकरण तथा अग्रणि बनाउन कुनै कसुर बांकि नराखौं। मधेस र मधेसिलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौं। तथाकथित अधीकार प्राप्तिको लडाईमा कोहि सर्वसाधारण ले ज्यान गुमाउनु नपरोस। सर्वसाधारणको वलिदान वाट प्राप्त अधीकारको सृंखलावद्धरुपमा चरम दुरुपयोग भएको छ, मुलधार तथा परिधीका पहिचानवादिहरु वाट। संकृण राष्ट्रराज्य भन्दा विशाल राज्यराष्ट्र गुणात्मक महत्वको छ।